जगदम्वा इन्टरप्राइजेजको लापरबाहीले गयो सिइओको ज्यान | Nagarik News - Nepal Republic Media
जगदम्वा इन्टरप्राइजेजको लापरबाहीले गयो सिइओको ज्यान
लुकाई छिपाई भारतबाट कामदार ल्याएर विना परीक्षण काममा लगाउँदा संक्रमण
कोरोना संक्रमणबाट बिहीबार जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका ५६ वर्षीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको (सीईओ) नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। भारतीय नागरिक उनको मृत्युसँगै इन्टरप्राइजेजका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई क्वारेन्टिन गरिएको छ।
असारको अन्तिम साता वीरगन्जको नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पतालमा तीन जना संक्रमित मात्र थिए । पालिकाहरूका क्वारेन्टाइन पनि खाली प्रायः भैसकेका थिए। 'महानगर कोरोनामुक्त हुने भएपछि हामी हौसिएका थियौं', वीरगन्ज महानगर प्रमुख विजय सरावगीले नागरिकसँग भने,‘अचानक आएको कोरोनाको बाढीले समुदायका कुनै वर्गलाई छोडेन।’ यो बाढी कहाँबाट पस्यो ? बाँध कसरी भत्काइयो ? बाँध किन बलियो पारिएन ? यी प्रश्नमा सरोकारबाला सबै नाजवाफ छन्। खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाउँदै पारिबाट लुकेर छिरे भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरु पन्छिरहेका छन्। सीमा सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकारको हो भन्दै प्रदेश सरकार उम्कीरहेको छ। लकडाउन खुकुलो पारिएपछि सीमाको सिल ब्रेक गरेका होइनौ भन्दै संघीय सरकार पन्छिदै छ।
साउन ७ गतेबाट सरकारले लकडाउन खोले पनि भारतसँगको तोकिएको नाकाबाहेक आवागमन बन्द नै राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लकडाउनकै अवधिमा जगदम्बा इन्टरप्राइजेजमा भारतीय कामदार भित्र्याइयो। पारिबाट कामदार भित्र्याएर उद्योगले काममा लगाएको पाइएको छ । लुकिछिपी आउनेहरु बाटै वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रमा संक्रमण फैलिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताए ।
तर, पछिल्ला १५ दिनमा पर्सामा करिब दुई सय जना संक्रमित थपिएका छन्। यस अवधिमा यहाँ १० जनाले प्राण त्यागेका छन्। जसका कारण समाजमा त्रास फैलिएको छ। वीरगन्जसँग सीमा जोडिएको भारतको रक्सौल आसपासका क्षेत्रमा संक्रमण व्यापक छ । भारतको विहारदेखि प्रायः सबै राज्य कोरोनाले आक्रान्त छन्।
भारतबाट कामदार ल्याएर बिना परीक्षण काममा लगाएको बारे जगदम्बाका अधिकारी भने बोल्न चाहँदैनन्। जगदम्बाका दीपक वंशलले फोनमा आफू जगदम्बा स्टिलतर्फको पदाधिकारी भएकाले इन्टरप्राजेजको घटनाबारे बोल्न नमिल्ने बताए। ‘खै कसरी घटना हुन गयो मैले सोध्नै पर्छ’ वंशलले भने,‘ जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको सबै काम वीरगंजको कार्यालयले नै हेर्छ, मैले सोधेर बताउँला।’ इन्टरप्राइजेजका मुकेश रौनियारले फोनमा भने,‘तपाइँले मेरो नम्बर कहाँबाट पाउनु भयो? घटनाबारे मलाई केही थाहा छैन उनले भने,‘म २० दिनदेखि काममा गएकै छैन, रामप्रतापजी लाई सोध्नुस।’ रामप्रताप सिंहले भने,‘म घटना जानकारी गराउने आधिकारिक मान्छे होइन। जगदम्बाको मुख्यालय काठमाडौंमै छ, त्यही सम्पर्क गर्नुस्।’
नेपालमा विदेशी कामदारले काम गर्नका लागि श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ तर कम्पनीमा काम गर्ने तल्लो तहका कामदारहरुको श्रम स्वीकृती नलिइकनै काममा लगाइएको कम्पनी स्रोत बताउँछ।
चैतमा लकडाउन हुँदा घर फर्केका भारतीय कामदार लकडाउन खुकुलो भएसँगै बारा–पर्सा करिडोरका उद्योग सञ्चालन भएपछि फर्किएका हुन्। यहाँका दुई दर्जनभन्दा बढी ट्रान्सपोर्टमा रक्सौल र आसपासका भारतीय कामदार कार्यरत छन्। वीरगंजमा निषेधाज्ञा लाग्नुअघिसम्म उनीहरू बिहान ट्रान्सपोर्टमा काम गरेर साँझ पारि फर्किने गरेका थिए । गत साउन ७ मा सुक्खा बन्दरगाहमा कार्यरत दुई जना कर्मचारी र एक ट्रक चालकमा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७७ १६:५१ शुक्रबार
कोरोनाभाइरस जगदम्वा इन्टरप्राइजेज